Muxuu ka yiri Michael Ballack go’aankii uu Joachim Low kaga saaray Leroy Sané liiska xulka qaranka Germany ee koobka aduunka 2018? – Gool FM
(Germany) 04 Juunyo 2018. Macalinka xullka qaranka Germany Joachim Low ayaa go’aansaday in uu ka saaro Leroy Sané liiska xidigaha kaga qeyb gali doona koobka aduunka ee 2018, kaasoo 14-ka bishan ka furmi doono dalka Russia.
Halyayga xulka qaranka Germany Michael Ballack ayaa muujiyay sida uusan ugu faraxsaneen go’aanka Joachim Low kaga saaray Leroy Sané liiska xulka qaranka Germany.
Laacibkii hore kooxda Chelsea Michael Ballack ayaa sida uusan ugu faraxsaneen go’aanka Joachim Low wuxuu ku muujiyay bartiisa Twitter-ka.
“Macalinka xulka qaranka Germany Joachim Low, wuxuu naftiisa ku abuuray cadaadis weyn, kadib markii uu liiskiisa koobka aduunka ka saaray Leroy Sané”
“Leroy Sané wuxuu ahaa da’ayarkii ugu fiicnaa horyaalka Premier League xli ciyaareedkan, laakiin sidaas ay tahay wuxuu koobka aduunka ka daawan doonaa gurigiisa”.
Si kastaba Leroy Sané ayaa wuxuu kusoo bandhigay kooxdiisa Man City xili ciyaareedkii dhawaan lasoo gabagabeeyay qaab ciyaareed cajiib ah, kadib markii uu Sky Blues kasoo muuqday 49 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan, wuxuuna kulamadan ku dhaliyay 14 gool wuxuuna sidoo kale ku caawiyay 19 gool kale. Isagoo kaalin mug leh ka qaatay in Man City ay ku guuleysato Premier League iyo Carabao Cup.
Yaya Toure oo si aan horey loo Maqal u weeraray Pep Guardiola...